Nri achicha. Ezi ntụziaka na foto - Ugu - 2019
Ezigbo ugbo muffins
A na-amata ugu ma mara ọtụtụ. Ugu soups, casseroles, ọka, pancakes na pancakes - niile efere ma ghara depụta. Anyị na-enye gị ụfọdụ ntụ ọka ndị dị ebube na ugu, ya bụ ugu muffins.
Ugu Muffin Ntụziaka
Njirimara bara uru nke ugu
A maara na ndị India si South America malitere itolite ugu ihe dị ka puku afọ ise gara aga, na narị afọ nke iri na ise, a kpọbatara ya n'ókèala nke Alaeze Ukwu Russia. Ihe mejupụtara nke ugu gunyere vitamin na mineral ndị a: A, PP, B1, B2, B5, B6, B9, C, T, K, E, potassium, calcium, phosphorus, ọla kọpa, chlorine, magnesium, sulfur, sodium na ndị ọzọ. Ihe caloric ya dị ntakịrị karịa 20 kcal kwa 100 g nke ngwaahịa, ọ bara ụba na eriri.
Ị ma? N'October 2016, otu onye Belgium na-azụ ọrụ na-ebute pumpkins dị kilogram 1,190.
Ugu na-asacha ahụ, ọ bara uru maka ọrịa obi, ọrịa akụrụ, ụkwara nta, afọ ntachi, oké ibu, maka igbochi caries, mee ka akpụkpọ anụ dịkwuo mma, na-eme ka ụmụ nwoke dịkwuo ike. A na-eji ugbo kpoo ikpuru, blackheads, dandruff.
Mụta otú e si akpọ nkụ, kpochapu ma chekwaa ugu n'oge oyi.
Gbalịa mee ihe nchịkọta mbụ maka achicha achicha a na-ejighị akacha - ọkụ, nkọ, na eriri nri. Maka nke a ị ga-achọ:
0,5 n'arọ nke ugu;
1 tablespoon nke nnu;
140 ml nke mmiri ọkụ;
25 grams shuga;
7 g ihe iko achịcha;
425 g ntụ ọka + maka ịfịnye ụdị ahụ;
3 tablespoons nke mmanụ nụchara anụcha mmanụ + 1 tablespoon iji lubricate ụdị;
4 cloves nke garlic;
35 grams nke Fikiere cranberries;
25 g peeled ugu osisi.
Akpa, i kwesiri ime mmanu mmanu. Wunye mmanụ a na-esi nri n'ime ite frying, kpoo garlic na mma, bee ma zipu ya na pan. Ghichaa ihe na-acha odo odo n'ime ihe dịka 0,5 cm na osisi ahụ, ziga ha na pan. Gbalie ike, kpoo ọkụ, wepụ si na ọkụ ma wepụ ya. Mmanụ kwesịrị ịdị ọkụ ma ghara ire ọkụ. Sugar wunye na nnukwu efere. Site na mmiri zuru ezu, were 2 tablespoons, tinye sugar ya, nwuo ruo mgbe etisasịwo. Wunye ihe iko achịcha ma wega ebe dị ọkụ maka minit 15. Grate ugu na akwukwo ogwu, tinye mmiri, mmiri, ntụ ọka, kpochapu nke ọma. Na mgwakota agwa kwesịrị nke nnyapade. Tinye nnu, wụsa mmanu mmanu site na sieve na kpochapu aka na nkeji 10-15. N'ihi ya, mgwakota agwa kwesịrị ịdị ngwa ma ghara ịrapara aka gị. Na-ekpuchi mgwakota agwa na akwa akwa ma ọ bụ jidesie ihe nkiri, tinye ya na ebe na-ekpo ọkụ n'enweghị ihe ngwọta maka awa 1. Mgbe oge a gasịrị, nweta ngwakota agwa ahụ, gwakọta ya na aka gị, wụsa cranberries, kpochaa nke ọma, kpuchie ọzọ ma laghachi na ịrị elu nke awa 0. Wunye mmanu akwukwo nri n'ime pan achicha wee kpoo ya ma o bu aka. Sichaa ntụ ọka, kpochapụ ntụ ọka. Tinye mgwakota agwa n'ụdị ma tinye ya na okpomọkụ maka awa 0. Kpoo oven na 210 ° C, wunye mmiri n'ime mma ma tinye ya na ala nke oven ka achicha ahụ ghara ire. Cupcake fesa na ugu osisi.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-ezigara yist mgwakota agwa n'ime oven, jiri nlezianya mechie ọnụ ụzọ ma ghara imeghe ya maka awa 0,5 mbụ, ma ọ bụrụ na mgwakota agwa ahụ nwere ike ịda.
Rie cupcake maka nkeji 7, wee belata okpomọkụ ruo 190 Celsius C ma mee ka ọ dịkwuo 20-25 nkeji. Ịdị njikere ịchọpụta na egwuregwu ma ọ bụ osisi skewer. Wepu cupcake ahụ gwụrụ site na oven ma hapụ ka ajụkwa ya n'ụdị maka nkeji iri, ma jiri nlezianya wepu ya site na ebu wee hapụ 2 awa. Akpụchare achicha ahụ n'ime mpekere ma jee ozi.
Nnọọ tọrọ ụtọ ugu na ọnụ na chocolate. Anyị na-enye gị otu uzommeputa maka ihe ụtọ nke ugu achicha na chocolate, maka nkwadebe nke kwadebe ngwaahịa:
3 tablespoons nke mịrị;
5 tablespoons nke bọta (tupu na-esi na refrjiraeto);
3 tablespoons shuga;
300 g ugu;
a pinch nke nnu;
6 tablespoons ntụ ọka;
20 g nke ntụ ntụ;
Nri nke ala cinnamon;
a pinch nke nutmeg;
tuo nke vanilla sugar;
50 g nke chocolate chocolate n'enweghi ihe;
ụfọdụ peeled na ṅara n'ọkụ ugu osisi maka ochicho mma.
80 g nke powdered sugar;
50 ml nke ugu ihe ọṅụṅụ;
50 ml nke mmiri ara ehi;
¼ ngwugwu nke bọta.
Raisin wunye mmiri ọkụ (ma ọ bụghị mmiri na-esi na mmiri, nke mere na tomato adịghị akwa) ma hapụ ịsa. Grate ugu na ọkara-sized grater, fesaa na nnu, na-ahapụ maka nkeji 5. ma mee ka ihe ọṅụṅụ ahụ ghọọ ihe dị iche iche (adịghị agbanye ya, ị ga-eme ya ntụ ọka). Chocolate crumble. Sift ntụ ọka, mix ya na ntụ ntụ, vanilla sugar, nutmeg na cinnamon. Debe bọta na sugar na mbụ na whisk (nke na ọ naghị efegharị na kichin), wee tie ya na minit 3, ruo mgbe ọ na-egbuke egbuke. Tinye nsen otu n'otu oge, na-eti eti na obere ọsọ oge ọbụla. Mgbe a gbanyechara akwa azụ, gbasaa ọsọ nke igwekota ma tie ihe maka ihe dị ka nkeji 4. Tinye ugu puree, jikọta ya na igwekota. Wunye chocolate, gbakwunye ihe na-ekpo ọkụ, jikọta nke ọma ruo mgbe ị ga-eji ire ụtọ. Na-amị mkpụrụ vaịn na sieve, ka mmiri drain, tinye akwa nhicha akwụkwọ, akọrọ.
Ọ dị mkpa! Iji mee ka mịrị na mgwakota agwa na-ekesa ma ghara ịkwaga na ala n'ime usoro ọka, fesa ya na ntụ ọka ma kpochapụ ntụ ọka ahụ..
Na-etinye mịrị na mgwakota agwa, mix ọma. Ọkụ ọkụ na 170 Celsius. Na-ekpuchi pan achicha ya na akwukwo nke ozo ka etiti ya dina ala, ya mere o ga - adi mfe iwepu cupcake mgbe e mechara. Dichaa mgwakota agwa na mixer maka ihe dị ka sekọnd iri abụọ, tinye ya n'omume ma dị mma. Ngwunye ahụ kwesịrị ekwesị kwesịrị ịdị oke, dịka achicha ude mmiri, ma n'otu oge ahụ, ọ ga-esi na spoon a tụgharịrị. Ụdị ahụ ga-ejupụta na mgwakota agwa karịa 2/3. Richaa nkeji iri anọ, lelee njikere na egwuregwu ma ọ bụ osisi nkwụ. Maka obi ụtọ, nkedo sugar icing, tinye ihe niile a na-etinye na ya ma ọ bụ nke dị ala. Obụpịa fudge na obere okpomọkụ, na-akpali mgbe niile, ruo mgbe mmanụ aṅụ dị oke. Ekwe ka ajụkwa maka 5 nkeji, wunye n'elu fudge na fesaa na ugu osisi.
Maka nkwadebe nke mbadamba ugu ugu na nke o siri ike na mkpuru gi ga-acho ihe ndi a:
1 iko (200 g) nke ọka wit;
1 teaspoon ntụ ntụ;
3 tablespoons dum wheat ntụ ọka;
¼ teaspoon nke soda;
1 teaspoon ihe ọṅụṅụ lemon;
nnu na ọnụ nke mma;
ala coriander na ọnụ nke mma;
pawuda n'ala n'elu ọnụ nke mma;
akara ala na ọnụ nke mma;
ala nutmeg na ọnụ nke a mma;
ala bhuryan na ọnụ nke mma;
nsị ala na ọnụ nke mma;
ala juputara na mma;
100 g ugu, grated on a medium grater;
2,5 tablespoons nke nụchara anụcha mmanụ na mmanụ;
2 ude mmiri ude 10% abụba (nwere ike dochie ya na mmiri ara ehi);
40 g pecan akụ (nwere ike dochie ya na mkpụrụ ọ bụla ọzọ);
40 g nke mịrị amị cranberries (nwere ike dochie ya na mịrị ma ọ bụ ndị ọzọ nke a mịrị amị tomato);
ụfọdụ peeled ugu osisi maka ochicho mma;
mmanụ na-esi nri maka ụdị nsị.
Gụkwa otú e si akụ otu ugu, na otu esi emeso ọrịa ya na pests.
Ọkụ na-ekpo ọkụ na 200 Celsius C. Griiz maka obere griiz cupcakes ma ọ bụ kpuchie ya na akwụkwọ iko iko. Gwakọta ihe niile na-esi ísì ụtọ (ntụ ọka a kwụrụ, ntụ ọka, nnu, coriander, cardamom, nutmeg, anise kpakpando, cloves, allspice). Soda iji kpochapụ ihe ọṅụṅụ lemon. Ghichaa mkpụrụ. Ọ bụrụ na ugu bụ ihe na-atọ ụtọ, a ga-etinye ihe ọṅụṅụ ahụ. Ghichaa akwa na shuga n'ime ụfụfụ. Na-aga n'ihu ịkụ aka, tinye mmanụ nri, ugu, ude (ma ọ bụ mmiri ara ehi), soda soda. Tinye ihe oriri na-ekpo ọkụ, jikọta nwayọọ nwayọọ na ngaji, wunye cranberries na mkpụrụ, jikọọ ya nke ọma.
Ị ma? Site na 1 osisi ukpa nke 100, ị nwere ike ịnakọta 300 kg nke ihe ubi.
Tinye ntụ ọka n'ime mpempe, jupụta ha karịa 2/3. Wụsaa osisi. Ime maka nkeji iri abụọ na ise, njikere ịlele ya. Wepu mpempe akwụkwọ ahụ na oven, hapụ maka minit 5-10, ma jiri nlezianya wepụ ha site na ebu ma tinye ha na okporo maka ịmịkwuo mmiri. Tinye ọkụ na tii ma ọ bụ kọfị.
Kwadebe mmanụ aṅụ, ma chọpụta otú o si bụrụ ihe bara uru.
Iji mee ihe na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ siri ike na-acha odo odo, ị ga-achọ ihe ndị a:
250 g ntụ ọka;
na-egbu mgbu na nkwụ nke mma;
1 teaspoon ala pawuda;
4 àkwá buru ibu;
200 g shuga;
200 g ugu grate a na-ajụ grater;
acha ocha 1 (ma ọ bụ obere ntụ ọka oroma);
210 ml nke mmanụ na-edozi mmanụ + 1 tablespoon iji mee ka ụdị ahụ dị.
1 teaspoon cornstarch;
100 ml nke ihe ọṅụṅụ ocha nke ọhụrụ;
2 tablespoons shuga;
Kpoo oven ruo 200 Celsius C, kpochie cupcake na-eme achịcha na oghere n'etiti mmanụ mmanụ. Sift ntụ ọka na nnukwu efere, wunye ntụ ọka, nnu, vanillin, pawuda. Na efere dị iche, tụọ nsen na ụfụ mmiri na, na-agbanyeghị igwekota, tinye nwayọọ. Tichaa ruo mgbe àkwá dị ọcha. Belata ọsọ nke igwekota, tinye ugu na mmanụ sunflower. Gbanyụọ igwekota. Ghicha ihe na-akpo akpo ma kpoo ya nke oma site na elu ruo ala, wee tie ya na igwe agwakota. Wunye mgwakota agwa ahụ n'ụdị, juputa karịa 2/3. Richaa nkeji iri anọ na ise, ịdị njikere ịlele ya. Hapụ ka ọ dị jụụ maka minit 10. n'ụdị ahụ, tinyezie efere ma wụsa fudge ahụ.
Ọ dị mkpa! Oge e ji esi nri nke muffins nwere ike ịdị iche maka oven dị iche iche, ya mere, tupu i wepụ ya, jide n'aka na ị ga-ahụ maka njikere.
Iji mee ka obi dị ụtọ, wụsa starch n'ime nnukwu efere, wụsa n'ime ihe ọṅụṅụ oroma (nke mere na mmiri dị mmiri) ma jikọta ya. Ihe fọdụrụ na ihe ọṅụṅụ na-agwakọta ya na bọta na shuga na chandan ma ọ bụ okpukpu ala, gbanye ọkụ na kpụ ọkụ n'ọnụ na-akpali akpali, mana ka ị ghara ịbụ. Wunye mmiri mmiri n'ime mmiri dị mkpa n'ime starch na ihe ọṅụṅụ, na-agwakọta nke ọma. Wunye uka ahụ n'ime saaan ma sie nri ruo mgbe mmanụ aṅụ. Ezi ntụziaka ndị a - ọ bụghị ihe niile a ga-esi na ugu sie ya. Ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya, jiri obi ekele ghọta echiche ndị ahụ. Ọ bụrụ na, ruo ugbu a, ihe oriri a abụghị ihe ụtọ gị - nwalee ya na muffins na, ma eleghị anya, ị ga-agbanwe obi gị.
Nkuzi nke nandina: akuku, nlekọta, mmeputakwa, transplant
Onye ndu na nduku na-eto eto: njirimara nke dịgasị iche iche na ihe ndị dị na nchịkọta nke klas nke "Nevsky"
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ezigbo ugbo muffins